'फिल्म खेल्नैका लागि निर्मातासग सम्झौता गर्न सकिन' - NayaNepal News
Home अन्तरबार्ता ‘फिल्म खेल्नैका लागि निर्मातासग सम्झौता गर्न सकिन’
चिटक्क कदकी सोनिका कार्की अलि ‘हक्की’ स्वभावकी छन् । चित्त नबुझेको कुरामा सिधैं असहमति जनाइहाल्ने स्वभाव छ उनको । ‘हक्की स्वभावकै कारण केही फिल्म छोडें,’ ललितपुर कुपण्डोलस्थित राजधानी दैनिकको कार्यालयमा शुक्रबार आइपुगेकी सोनिका खुलिन्, ‘फिल्म निर्माताबाट नसोचेको डिमान्ड आयो, मन परेन, छोडिदिए“ ।’
मूल घर इटहरी भए पनि उनको जन्म काठमाडौं बालाजुमा भयो । अनि, उच्च शिक्षाका लागि केन्याको न्यारोविक पुगिन् । त्यहा“को एक्सल ग्लोबल कलेजमा सन् २०१७ मा ‘बीएसडब्लू’ कोर्स पूरा भएपछि काठमाडौं आइन् । उनको खास रुचि ‘डान्स’ हो । ‘एउटा साथी’ नामक फिल्मबाट ‘आइटम सङ’मा डेब्यु गरेपछि सोनिकाको दिन फि¥यो । म्युजिक भिडियोका लागि ‘अफर’ बढ्न थाले । भन्छिन्, ‘यसैमा सन्तुष्ट छु, अब फिल्ममा मन छैन ।’ कला क्षेत्रमा हुने ‘यौनशोषण’बारे खुलेर बोल्न रुचाउने सोनिकासंग राजधानी दैनिककालागि युमाश शेर्पाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मोडल नै किन हुनुप¥यो ?
-विश्व परिवेशमा ‘मोडल’ प्रतिनिधि पात्र हो । उसको ‘लाइफ स्टाइल’ मोहक देखिन्छ । लगाइ, हि“डाइ र बोलाइमा समेत सन्तुलन राख्नुपर्ने हुन्छ । विश्व कतातिर गइरहेको छ र कसरी ‘अपडेट’ भइरहेको छ भन्ने मोडलिङबाटै थाहा हुन्छ । मोडलिङ वा मोडल भन्नेबित्तिकै छाडापन हुनैपर्छ भन्ने छैन । यसले आफूलाई सक्षम बनाउने काम गर्छ ।
पहिलोपटक ¥याम्पमा हि“डेको याद छ ?
-पाँच वर्षअघि हिँडेको थिएँ ।
सानै उमेरमा यो क्षेत्रमा लागिएछ नि ?
-चार वर्ष भयो । त्यतिखेर म १५ वर्षकी थिए“ ।
चलचित्रतिर पनि रुचि छ ?
-थियो, अब छैन । मोडलिङमा लाग्दा लाग्दै केही फिल्म पनि पाएँ । तर, निर्मातासग सम्झौता गर्न सकिन“ । नकारात्मक प्रस्ताव बढी आए ।
सबै निर्माता उस्तै हुन्छन् भन्ने छ र ?
-छैन । अब फिल्ममा पटक्कै रुचि छैन ।
राम्रा फिल्ममा ‘अफर’ आए ?
-खै रु तर, फोकस डान्स नै हो । प्यासनमा यसैमा छ । राम्रो टिम छ भने फिल्म गर्न पनि सक्छु ।
आम्दानी कुनमा बढी हुन्छ रु मोडलिङ कि डान्स ?
-मोडलिङभन्दा बढी कमाइ भिडियोमा हुन्छ ।
कला क्षेत्रमा चित्त दुखेको केमा छ ?
-नकारात्मक प्रस्ताव आउन थालेपछि एक वर्ष ‘फ्रस्टेसन’को सिकार भए“ । त्यो अवधिमा केही पनि गर्न सकिन“ । फिल्मको ‘वर्कसप’मा एक हप्तासम्म गए“, अन्त्यमा फिल्मै छोड्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । त्यसले गर्दा ‘फ्रस्टेड’ भए“ । काम गर्ने जागरै आएन ।
कति वटा फिल्म छाड्न बाध्य बनाइए ?
-थुप्रै । कला छ भने शरीर किन बेच्ने रु निर्देशककै कारण कला भएर पनि थुप्रै कलाकार अर्को बाटो रोज्न बाध्य छन् । कला सानो–ठूलो हुँदैन । यो क्षेत्रमा ‘डोमिनेसन’ बढी हुने गरेको छ ।
मोडलिङ र नृत्यबाहेक कुनै योजना ?
-समाज सेवा गर्ने सोच छ । व्यापार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । कला मेरो प्यासन भइहाल्यो । तर, ‘साइड जब’ पनि चाहि“दो रहेछ । अरूको रोजगारीका लागि व्यापारी गर्ने सोच बनाएकी छु । विशेषगरी, होटल–क्याफे सञ्चालन गर्ने सोचेकी छु ।
मेकअप : गंगा श्रेष्ठ
Previous articleउमेर १०३, कमाइ तीन हजार
Next articleसेटिङमा जम्दै जुवा अखडा श्रीमती कमाउने श्रीमान् उडाउने
‘औँठी बेचेर म्युजिक भिडियो बनाएँ’